OTA-13 dia hanatsara ny fifanarahana amin'ny PinePhone sy PineTab | Ubunlog
Mey lasa teo, UBports Nanomboka izy ny OTA-12 an'ny rafitra fiasa mikasika izay novolavolainy, miaraka amin'ny zava-baovao fa vita ny fifindrana avy amin'ny Unity8 mankany Lomiri. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa izay naka ny Ubuntu Touch rehefa nijanona ny Canonical dia miasa amin'ny OTA-13, kinova efa an-dàlam-pandrosoana izay ho tonga miaraka amin'ny vaovao manandanja ho an'ny vondrom-piarahamonina PINE64: ny tetikasa dia mifantoka amin'ny fampandehanana ny rafitra fiasa amin'ny PinePhone sy PineTab.
Araka ny nohazavaina ao amin'ny Ubuntu Touch Q&A 82, UBports OTA-13 dia hanatsara ny zava-bita amin'ny fananganana Chromium farany, hanampy fiarovana bebe kokoa ary fiasa sasany. Etsy ankilany, mbola miasa manavao ny Qt 5.12, fa ny tena misongadina indrindra dia ny vaovao ho an'ny fiarahamonina PINE64. Ary, raha ny fijeriny azy, dia samy mpividy indrindra ny PinePhone sy ny PineTab ary vetivety dia lany ny tahiry.
Inona no vaovao ao amin'ny OTA-13 ho an'ny fitaovana PINE64
Fanohanana OpenGL amin'ny PinePhone. Amin'izao fotoana izao Ubuntu Touch amin'ity smartphone finday ity avy amin'ny Allwinner dia mampiasa ny fanafainganana ny lozisialy, izay mandeha tsara, nefa izao dia hanana mpandefa OpenGL miasa miaraka amin'ny kinova manaraka.
Vita ny ozinina voalohany vita amin'ny Ubuntu Touch amin'ny takelaka PineTab. Ity sary ity dia manana mpamatsy mpampiasa izay mandeha ary mandeha tsara amin'ny alàlan'ny takelaka takelaka, fa ny endri-javatra hafa dia mbola miasa ihany.
Misy ny fanohanana fakantsary miasa izao ho an'ny PinePhone, saingy mbola somary miadana ihany izy io ary misy fetrany hafa, toy ny ferana amin'ny maody 2.1MP amin'izao fotoana izao.
Namboarina ny switch Bluetooth ho an'ny PinePhone.
Miresaka ihany koa ny PINE64 fa mandroso amin'ny Anbox izy ireo, ilay rindrambaiko mamela ny fampiharana Android amin'ny Linux, zavatra iray izay raha ny fijerin'ity mpamoaka lahatsoratra ity dia tena zava-dehibe. Ny Ubuntu Touch OTA-13 mbola tsy misy daty famotsorana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » OTA-13 dia hanatsara ny fifanarahana amin'ny PinePhone sy PineTab
NewsFlash, mpamaky RSS mitady hahomby amin'ny FeedReader
Mikaroha tadiny na lamina ao anaty lahatsoratra tsotra avy any amin'ny terminal